Nagarik News - वाल्मीकि आश्रम
१९ श्रावण, २०७०
आश्रम पुग्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बर्दघाटबाट करिब २७ किमि दक्षिण नवलपरासीको त्रिवेणी हुँदै जानुपर्छ। त्रिवेणीबाट डुंगामा नारायणी नदी तरेर पूर्वतर्फ करिब एक घन्टा जंगलको बाटो हिँडेपछि वाल्मीकि आश्रम पुगिन्छ। बर्सात्को समयमा भने यो बाटोबाट आश्रम पुग्न सकिँदैन। अरू समयमा पनि जंगली जनावको डर रहन्छ।
नारायणी नदीमा भारतीयपक्षले बनाएको पुल तरेर विहारको वाल्मीकि नगरबाट करिब सात किलोमिटर भारतीय जंगलको यात्रा गरेपछि आश्रम पुग्न सकिन्छ। तर, त्यताबाट हिँड्दा बाटोमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट प्रशस्तै झमेला बेहोर्नुपर्छ। मध्य नेपालको चितवन जिल्लामा रहेर पनि यो पवित्र भूमिसम्म पुग्न कुनै स्थायी बाटो नहुनु दुःखद पक्ष हो; यो सुन्दा जो कोहीको पनि मन कुडिँन्छ।
नेपाल र भारत दुवै देशका पुरातत्वविद्को संयुक्त टोलीले सन् १९६५ मा प्राचीन वाल्मीकि आश्रम यहीँ रहेको पत्ता लगाएका हुन्। यही स्थानमा यज्ञ गरेका वाल्मीकिले रामायणलगायत काव्य रचना गरेको भनाइ छ। लवकुशले जन्म लिएका, सीताले जीवनको अन्तिम समय व्यतीत गरेको तथा लव र कुशले यही स्थानमा शिक्षा लिएको किंवदन्ती पनि छ। यस्ता धार्मिक–ऐतिहासिक आधारमा वाल्मीकि आश्रम महत्वपूर्ण गन्तव्य बनेको छ।
आश्रम स्थलमा रहेको सीताको मन्दिरभित्र उनले पाताल प्रवेश गरेको स्थान छ। वरिपरि लव–कुशले अश्वमेध यज्ञको घोडा पक्रिएर बाँधेको खम्बा, शिक्षा ग्रहण गरेको स्थान, पानी पिउने गरेको पुरानो इनार र अन्य पुरातात्विक धार्मिक वस्तु अवशेषका रूपमा छन्। संसारमा विरलै देखिने हनुमानले एउटा घुँडा टेकेको मूर्ति सीता मन्दिरबाहिर प्रतिष्ठापित छ। सीताले मसला पिस्ने गरेको सिलौटो पनि सुरक्षित राखिएको छ। ढुंगाको लौरोले महिलाले मसला पिसेमा पेटको रोग नहुने र उनीहरूले पकाएको खाना स्वादिस्ट हुने विश्वासले त्यहाँ पुग्ने महिला सिलौटोमा मसला पिस्न थालिहाल्छन्। तर, उचित संरक्षण अभावमा ती अवशेष लोप हुने स्थितिमा पुगेका छन्।
नेपाल–भारत सीमानजिक पर्ने यस स्थानमा अन्य देवीदेवताका मठमन्दिर पनि छन्। पर्यटकीय दृष्टिले समेत यो स्थान महत्वपूर्ण छ।
वाल्मीकि आश्रम उपेक्षित हुनुमा प्रचार–प्रसारको अभाव र विकट भौगोलिक अवस्था नै प्रमुख हुन्। आश्रम नवलपरासीको सुस्ता गाविसमा पर्ने सोना, नारायणी र तपसा नदीको संगम स्थलमा पर्ने प्रसिद्ध त्रिवेणीधामबाट नजिक छ। अझ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको धार्मिक स्थान पनि। त्यहाँ पुग्न सहज बाटो नहुनु र बस्ने–खाने ठाउँको अभावले यात्रुलाई सास्ती हुनु स्वाभाविक हो। दैनिक हजारौको संख्यामा त्रिवेणी पुग्ने भक्तजनको सानो अंशमात्रलाई पनि यस पवित्र स्थानसम्म पुर्याउन सके धामको कायापलट हुने पक्का छ।
एकातिर सीताको जन्मस्थल जनकपुरको महिमा देश–विदेशमा फैलिरहेको अहिलेको स्थितिमा उनै सीताले आफ्नो मानवचोला विसर्जन गरी धरतीमा समाहित भएको यो पवित्र भूमिलाई सबैले जनकपुरसँगै जोडेर हेर्नु जरुरी छ। जबसम्म यहाँ रहेको सीताको पाताल प्रवेश स्थलको दर्शन गरिन्न, तबसम्म जनकपुर, अयोध्या, रामेश्वरमलगायत सीतारामसँग सम्बन्धित स्थानको दर्शन पूरा हुन सक्दैन।
'आशा मारेका छैनौं'
पहाडी भूमिमा अक्सर नदीलाई पछ्याउँदै बाटाहरू बन्छन्। तिनै बाटामा मानिस नदीजस्तै बग्दै जीवन बाँच्ने उपायको खोजीमा निस्कन्छन्। जसरी नदी सधैं शान्त बग्दैन, मानिसका यात्राहरू पनि दुर्घटनाग्रस्त हुन्छन्।
राष्ट्र भएर बाँच्ने कि कबिला?
विश्वको इतिहासमा सबभन्दा पहिले धेरै जात–जातिका समूह मिलेर 'राष्ट्रको धारणा विकसित भयो, त्यो भूमि दक्षिण एसिया नै थियो। त्यसैले विश्वको सबभन्दा प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेदले भन्यो– हे राजा! हामी सबै मिलेर...
अक्षर अंकुराएको बेला
वास्तवमा ती अक्षरहरू नै थिए, मसिना फन्टमा उतारिएका । जसले मानिसको दिमागमा बिस्तारै कम्पन पैदा गथ्र्यो । समाज र जीवनप्रति अति सामान्य सोच, जीर्ण पोस्चरमा निरीह बाँचिरहेका ग्रामीण हृदय झंकृत...
पानी पुनर्जीवनको मुद्दा
काठमाडौं– मल्लकालमा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी भूमिगत स्रोतमा निर्भर थियो। त्यतिबेला ढुंगेधारा र इनारमा जमिनमुनिको स्रोतबाट अटुट पानी आउँथ्यो।
'झलेन्द्र प्रसादको लिला' पुस्तकका रुपमा आउन लागेको र शिल्पीको गोठाले नाटकघरमा नियमित मन्चन भैरहेको नाटक हो। नायक प्रधान नाटक। झलेन्द्रप्रसाद अति बाठो पात्र हो। खलनायक भए पनि नाटकको प्रमुख पात्र।
यौटा सडक नाटकमा मैले पहिलोपटक उसलाई देखेको हुँ। ऊ २५/३० को युवा भए पनि भिखारीको भूमिका थाल थापेर दर्शकसँग रकमको भिक्षा माग्दै मेरो छेउमा आइपुग्यो। पाँच रुपैयाँको नोट राखिदिँदै रोल...